Monday July 27, 2020 - 17:50:10 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Haddaba bal aynu maanta soo qaadanno qabiilku waxa uu yahay iyo sida la inooga baahan yahay in aynu u isticmaalno, akhristow qabiilka ama haybta qofku waa baadi-sooc uu kaga duwan yahay dadka kale (Identity).
Sida qabiilka loo isticmaalayo waxa inagaga filan inta ay diinteenna qayimka ahi ka sheegtay, waa wax la isku garto la iskuna xidhiidhiyo. Nasiib darro dad baa laba wax isku qalda, qofka oo la sheego haybtiisu ceeb ma aha, tusaale ahaan; hebel waa reer qudhac kana sii ah reer qansax. Taasi ceeb ma aha ee waxa ceeb ah in aad reer qudhac mooddo wax samada kasoo dhacey oo aysan jirin cid lamid ahi,
qabyaaladduna waa inaad ku sed bursato reer hebelnimo waxna ku mucaariddo adiga oo aan xaq u lahayn. Qabiilka aad xaqdarrada ugu doodeysaa kuma abuurin kumana quudiyo hadhowna u noqon meysid markaa haddii aad intaas yaqiinsan tahay ha iska xumayn meesha aad ku xidhmeyso. Qabiil iyo tol berri haddii ay wax dhacaan kuu soo baahanaya oo tamar ku soo bidaya waxba badan ugama baahnid, uma baahnid tolweyne aad gardarro ku raacdo ee waxa aad u baahan tahay allaha sida fiican kuu khalqay ee aan isagu waxba kaaga baahnayn inaad amarkiisa addeecdo oo sidii uu qabiilka ugu talo galey u isticmaashid.
Dadka soomaaliyeed marka faankooda laga yimaaddo waxa ay si gardarro ah u hayb soocaan qayb iyaga kamid ah. Maalin sabti ah wiil baa usoo kallahay waxbarasho, waxa uu dhiganayay fasalka toddobaad ee dugsiga dhexe. Wiilku waxa uu ahaa dadka waxbarashada ku fiican hase ahaatee maalin yaableh ayey u ahayd maalintaasi, markii uu fasalka soo galey waxa sabuuradda loogu sii qorey far waaweyn "MIDGAANKA FASALKA DHIGTAA WAA KUMA?”.
Wiilkii waa uu naxay oo markii uu fadhiistey kursigiisii ayuu xagga dambe eegay mise waa galaaskii oo dhan oo wada qoslaya, waa uu argagaxay kadibna labadii inan ee la fadhiyey ayuu weydiiyey yaa ku qorey sabuuradda waxan? Iyagna waxa ay ugu jawaabeen hadhow baanu kuu sheegi doonnaa marka la baxo!
Show waa ciyaal loogu hanjabey in haddii ay sheegaan la dili doono. Waxa ay meesha ku fadhiistaan saddexda ugu yaryar fasalka. Wiilkani waa beelaha la hayb sooco balse weligii xan mooyaane sidan oo kale uma arkin dad ku caaya haybtiisa. Iyadoo sidii la yahay ayuu macalinkii fasalku soo galey kolkaasuu arkey wixii meesha ku qornaa. Ilaahay amarkii wiilkii yaraa oo weli naxsan isna aanu waxba ka ogayn ayuu kiciyey, wuxu ogaa in wiilkaasi yahay kan fasalka ugu xariifsan markaasuu weydiiyey intii meesha lagu qorey "WAA KUMA MIDGAANKA FASALKA DHIGTAA?”.
Wiilkii yaraa buugaagtiisii buu qaatey dibna waxbarasho uguma noqon, hore waalidkii waxa ay ugu sheegi jireen in aanu dadkan waxba ku ag baran karin ee uu iska shaqaysto balse maalintii mashaqadaasi ku dhacdey ayuu meheraddii aabihii tagey oo furayaashii kala wareegay sidiina uu waalidkii ugu shaqayn jirey. Mar dambe ayuu macalinkii ogaadey wiilkii iyo dhagartii ay ardayda qaar kamid ahi soo maleegeen, wiilkii buu u tagey oo saamaxaad ka dalbadey iyo in uu dugsigii ku soo laabto, wiilkiina waa uu saamaxay hase ahaatee dib iskuulkii uguma noqon!.
Reerka aad ka dhalatey, waalidkaa iyo sida quruxda badan ee alle kuu abuurey dadka ha ugu faanin sababtoo ah adigu ma aanad dooran ee ilaahay baa kuu doorey. Dadka akhlaaq wanaagsan kula dhaqan maxaa yeelay nebiga waxa loo soo saarey inuu dhameystiro akhlaaqda teeda wanaagsan.
Qarax gaari looga gubay ciidamada Uganda oo ka dhacay duleedka Baraawe.
Weerar gaadiid looga gubay ciidanka Kenya oo ka dhacay dhulka NFD.
Maamulka 'Somaliland' oo dil toogasho ah ku fuliyay Maxaabiis ku xirnaa Xabsiga Mandheera.